I-Airbus ye-Project A32x FD-FMC v1.55: alukho uhlu lwe-SID / STAR ku-FMC
Umbuzo I-Airbus ye-Project A32x FD-FMC v1.55: alukho uhlu lwe-SID / STAR ku-FMC
2 iminyaka 1 iviki eledlule #814 by CL38
Ngithumela lo mbuzo ngoba angikwazi ukuphuma enkingeni izinsuku ezimbalwa.
Inkinga yami: ngemuva kokufakwa kwe-Project Airbus A32x FD-FMC v1_55 (isoftware elandiwe kusuka library.avisim.net) lapho ngiqala uhlelo lokusebenza P3DI-_v4 indiza yamahhala ngecebo lendiza lamahhala ukusuka eNice-Côte d'Azur iya eLondon Heathrow, kuthi ngemuva kokuqala izinjini kwi-FMC anginalo uhlu lwe-SID / STAR futhi ikhibhodi ye-FMC ayisebenzi.
Ngiqaphele ukuthi incwadi yokufaka ye-addon ibonisa ukuthi lolu hlobo lwesigameko kufanele luvele ekufakweni okubi kwe-XMLTools3D.dll noma isimemezelo esibi ku-DLL.xml kodwa angiboni iphutha engilifakile ekufakweni kwami.
- kusukela izinyanga ze-2 engihambile FSX IGolide Edition kuya P3D v4; Ngaphambilini bengifake iphrojekthi le Airbus FSX ngaphandle kwezinkinga futhi isebenza ngokujwayelekile;
- ngaphambi kokufudukela P3D Ngikhishwe FSX nezinceku zami;
- Ngemuva kokufakwa kwe P3D Ngabuye ngabuya FSX (ngaphandle kokusheshisa) ukuthola izindiza eziqukethwe FSX kepha engekho P3D, ngaphandle kwenkinga;
- Ngibuyisele futhi ngisebenzisa iphakethe le-A320 Familly Mega kusuka ku-Rikoooo, akukho nkinga;
- Ngilande i-Project Airbus A32x v1_55 futhi ngiyifaka kulandela incwadi yokufaka (ukufakwa kwencwajana ye P3D v4); Ngiphawule ukungafani phakathi kwencwajana yokufaka nesihlahla sesoftware
I-§5: Ngikopishe i-XMLTools3D.dll ku-C \_ Izinhlelo \_ Lockheed_Martin \_ Prepar3D_v4
I-§5: Ngidale ifolda engu- "Modules" ku-C \_ Programs \_ Lockheed_Martin \_ Prepar3D_v4 lapho nginamathisela uLoggerX.dll
§7: Ifayela le-FD-FMC_database.kmz alikho kwifolda ye-FD_FMC kodwa ku-FD_FMC Doc & Manuals; Ngilithumele efayeleni le-FD-FMC;
§7: ifayela FMC_Path.ini ayitholakali kusuka ku-V1.55, ngakho ngithole i-FMC_Path.ini kusuka kunguqulo yami yangaphambilini v1.0 futhi ngiyikopishe kwifolda FD_FMC
I-§8.2: Ifayela le-DLL.xml liku-C \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D_v4; Ngifaka izimemezelo ezimbili ezichaziwe (i-XMLTools ne-LoggerX); Ngokuphikisana nalokho okukhonjisiwe ngiyazibuza ukuthi ngabe leli fayela likufolda eyinhloko ye P3D njengoba kukhonjisiwe;
- Futhi lapho ngethula indiza yami mahhala ngibhekene nenkinga
- Ngisebenzise i-Project Airbus A32x 1_55 kusuka FSX (ukufakwa kuyazenzakalela); Ngihlangane nezinkinga ze-2 zokungakwazi ukubonisa ngaphezulu kwe-↑ 5 futhi kungekho-FMC ene-↑ 7; engakuxazulula ngokufaka FSX Ukusheshisa; bese-ke indiza yami i-Nice> London ne-SID / STAR isebenza kahle.
Kukhona futhi inkomba engahle ibaluleke, okungukuthi lapho ngisebenzisa FSX Nginemiyalezo yokuphepha yokwamukela iXMLTools.dll njengefayela elivikelekile ne-trust, imiyalezo yokuphepha engingenayo uma ngisebenzisa P3Dv4.
Uma kukhona ongitshele ukuthi ungaphuma kanjani kulesi simo esibi P3D v4, ngingabonga kakhulu.
Isikhathi ukudala page: 0.161 imizuzwana